विदेशी प्रेमीलाई पाखा लगाउँदै अंगदसँग नेहाको प्रेम !
एजेन्सी, २० मंसिर । बलिउड अभिनेत्री नेहा धूपिया यतिबेला मिडियामा छाउकी छन् । उनले एकातर्फ फिल्म ‘तुम्हारी सुलु’का लागि एक अवार्ड हात पारिन् भने अर्कातर्फ नयाँ प्रेमीसँग रोमान्स गरिरहेकी छन् । यसैकारण उनको बलिउडमा चर्चा बढेको छ ।
नेहाले भने अंगदसँगको प्रेमसम्बन्धबारे केही पनि खुलाएकी छैनन् ।
सुनन्दा पुष्करः मोदीको ‘५० करोडकी गर्लफ्रेन्ड’
मिथुन चक्रवर्ती अस्वस्थ
करिनाका कारण फिल्मबाट निकालिए सिद्धार्थ मल्होत्रा
आलियाको ‘राजी’ले दुई दिनमा कति कमायो ?
प्रियंकालाई ठूलो झट्का !